Andres Iniesta Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Andres Iniesta Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny legiona baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Andr Andrés'. Ny Andres Iniesta Andriamatoa tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony ny rehetra saingy tsy dia misy vitsy ny mahita ny tantaram-piainan'i Andres Iniesta izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Andres Iniesta Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra -Voalohandohan'ny fiainana
Andrés Iniesta Luján dia teraka tamin'ny andro faha 11Tio volana, 1984 tao amin'ny tanàna malaza Fuentealbilla, Espagne avy amin'ny rainy, José Antonio Iniesta (Business Mongol) ary i Neny, María Luján Iniesta (mpitahiry trano).
Teraka tahaka ny zaza kambana sy manan-karena izy. Manankarena amin'ny ray aman-dreniny sy ny fahasambarana avy amin'ny tanàna miavaka any Albacete, Espaina. Lehibe tao amin'ny kaominin'i Albacete izay fantatra amin'ny zavatra roa; ny isan-jatony amin'ireo mpandahateny espaniola sy ny divay tsara.
Nanana izay nilainy i Andres ary naniry ny ho toy ny zazakely kely. Nanaja ny fanirian'ny ray aman-dreniny izy.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Career aloha
Izy dia nanomboka nilalao tamin'ny taona 10 niaraka tamin'i Albacete Balompié, fikambanana iray ao an-tanàna any Albacete.
Tamin'ny taona 12, fony izy nilalao fifaninanana, dia nisarika ny sain'ny mpilalao baolina kitra any Espaina izy. Ny ray aman-drenin'i Iniesta dia nifandray tamin'ny mpanazatra FC Barcelone Enrique Orizola.
Noho ny fanomezam-pahasoavana azon'izy ireo tamin'ny lalao, dia nandresy lahatra an'i Orizola izy ireo handinika ny fakana an'i Iniesta ho ao amin'ny Academy Youth Youth.
Tamin'ny resadresaka vao haingana, ny dadan'i Iniesta dia nahatsiaro ny fotoana nanontaniana azy. "Ahoana ny fahatsiarovanao ny fotoana izay tsy maintsy nametrahan'i Andrés ny entany ary nifindra tany Barcelone?". Araka ny azy.Fotoana lava be no nanaovany ny fanapahan-kevitra farany. Nahazo ny tolotra FC Barcelone izahay ary tsy maintsy nandeha tany La Masia, akademia misy ny klioba izahay, satria tsy afaka nandao ny tanànanay Fuentealbilla izahay. Tsy te hiala ny fianakaviana izy ary nilaza tamiko mazava tsara fa tsy nahita ny tenany izy. Nolazaiko azy fa tsy tonga matetika ireo karazam-pifandraisana ireo, ka nahazo fanabeazana tsara tao amin'ny akademia izy ... Andro vitsivitsy taorian'izay dia tonga tao amiko i Andrés ary niteny hoe: "Dada, handeha ho any Barcelone aho". Diso aho, ka nanontany azy aho hoe nahoana izy no niova hevitra. Ary nilaza zavatra tena manaitra ahy izy. Hoy izy hoe: "Handeha aho satria te handeha aho satria nofinofinao izany". Hatramin'io fotoana io dia azoko lazaina fa efa nianatra zavatra betsaka tamin'ny zanako aho. Nampianatra ahy be dia be izy tamin'ny 12.
Nandeha niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny izy mba hitsidika ny Akademia La Masia ho an'ny tanora mpilalao baolina, ary avy eo, ny ray aman-dreniny dia nanapa-kevitra ny hisoratra anarana ao amin'ny academy. Taorian'ny sarin'ny sary dia nandao ny tranony ny ray aman-dreniny. Izany dia nitranga tamin'ny taona 1996.
Tsy toy ny académie maro ny FC Barcel dia mitaona ny mpilalao rehetra avy ao an-tanàna ao amin'ny trano fivarotana azy ireo hatramin'ny taona 13 na 14. Na dia izany aza, dia i Xiomx fotsiny no nataon'i Iniesta ary tsy dia mahazatra loatra ilay klioba hanasonia olona iray izay tanora. Na dia teo aza ny fanoherana sasantsasany, nanohy ny asany ny klioba tamin'ny famerenana azy ary afaka matoky fa io no iray amin'ireo fanapahan-kevitra tsara indrindra azon'izy ireo ho an'ny tenany sy ny mpilalao.
Andres Iniesta Manomboka amin'ny FC Barcelona
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny dingana sarotra
Nisy tanora Iniesta niady tamin'ny fialan-tsasatra tamin'ny ray aman-dreniny. Matetika izy no nikarakara azy.
Hoy i Iniesta "Nitomany renirano" ny andro nialany La Masia ary niady mafy ny hisaraka amin'ny ray aman-dreniny. Tena saro-kenatra izy ary nitazona tany an-tanindrazany.
Young Andres Iniesta Nandao ny ray aman-dreniny
Nosambariny ny ekipa Barcelona Under-15 mba handresy amin'ny fiadiana ny amboara Nike Premier 1999, izay nahatratra ny tanjony nandritry ny minitra farany tamin'ny farany ary nomena anarana mpilalao amin'ny fifaninanana. Ity ambany ity ny sarin'i Guardiola manolotra an'i Iniesta, ny tropikany.
Tanora Andres Iniesta nahazo loka avy amin'ny Pep Guardiola
Ny fombany, ny fandanjalanjany ary ny fahaiza-manaony dia nitarika an'i Espaina mba handresy ny UEFA European Under-17 Championship 2001 sy ny Championship Under-19 ny taona manaraka.
Vantany vao tonga tao amin'ny klioba i Iniesta, kapiteny Pep Guardiola nilaza tamim-pahatsorana tamin'ny mpiara-milalao foibe Xavi: "Handao ahy ianao. Ity tovolahy [Iniesta] ity dia handefa anay rehetra "
Izy ihany no niafara tamin'ny famindrana an'i Guardiola tamin'ny taona 11 tao amin'ny klioba izay niasa tamin'ny 1990 ka hatramin'ny 2001.
Tanora Andres Iniesta, manery Pep Guardiola to remove
Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara ankehitriny.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Andres Iniesta dia avy amin'ny fianakaviana manetry tena sy manankarena. Fianakaviana espaniola iray.
Ny mogul dadan'ny dadany izay nanomboka tamin'ny paikady. José Antonio Iniesta dia nanomboka nanao asa fanorenana alohan'ny fananana fanjakana. Rehefa tsy nanana asa tokony hatao izy, dia efa nifindra tany amin'ny morontsiraka izy mba hiasa ho mpandroso sakafo.
Izy dia tia baolina kitra foana ary nahavita ny ezaka rehetra, ka i Andres zanany dia afaka nanamboatra nofinofy teo amin'ny tongony.
José Antonio sy Andres
Hatramin'ny andro voalohany tany amin'ny tanàna kelin'i Fuentealbilla ao Espana mandra-pahatongany amin'ny tampon'ilay baolina matihanina, José Antonio dia teo akaikin'ny zanany.
Ny fifandraisan'i Andres Iniesta an'i José, Jose
Fantany ny mitomany rehefa mahita ny zanany lahy amin'ny fanaintainana na maratra. Araka ny filazan'i José Antonio Iniesta,
"Eny, betsaka. Mitomany aho. Mitomany aho rehefa reraka ny Andres na mahita azy amin'ny fanaintainana fa misy zavatra tsy mandeha tsara. Ankoatra izany, nisy fotoana marobe ny nitomany raha tsy niala an-trano i Andrés mba hanomboka ny asany amin'ny FC Barcelone. "
Na dia eo an-tampon'ireo mpilalao manerana izao tontolo izao aza i Iniesta, dia mbola manana fotoana hanaovana ny raharaham-pianakaviana.
José Antonio Iniesta sy Zanaka, Andres Iniesta manao ny Family Business
Amin'izao fotoana izao, José Antonio dia mitantana ny famokaram-pianakaviana Bodegas Iniesta. Rehefa manontany azy ny olona mba hampitaha ny zanany amin'ny divay, hoy izy "Divay tsara kalitao, sy tso-po ary malina."
Ny Iniesta Sr. dia manazava ny fomba nifantohan'ilay zanany lahy tamin'ny lalao baolina kitra ary ny fanatanterahany tsara ny klioba sy ny firenena.
"Tsy niezaka mihitsy izy ho mpitarika na kapiteny na inona na inona," hoy izy. "Misy ireo komandy izay manana ny anjara toerany amin'ny herim-pony ary ireo hafa manao izany amin'ny fanetren-tenany, dia nofidian'ny mpiara-miasa aminy izy ireo. Ankehitriny i Andres zanako. "
rENY: María Luján sary eto ambany ny renin'i Andres Iniesta.
Andres Iniesta sy Neny, María Luján
María Luján dia tsy dia mpilalao mediam-bahoaka loatra fa misy olona fantatra fa nahita ny lalao rehetra izay nilalao ny zanany hatramin'ny nanombohany ny asany.
anabaviny; Maribel Iniesta no hany rahavavy sy rahavaviny ho an'i Andres Iniesta. Nihalehibe izy teo amin'ny faritra izay mbola mitombo hatrany ny orinasa divay. Mitovy aminy izy tsy toy ny dadany.
Ny anabavin'i Andres Iniesta-Maribel Iniesta
Mbola mifototra amin'ny fakany ihany i Maribel raha mitantana ny orinasan'ny divay izao.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Ny Tantaram-pitiavana an'i Andres Iniesta dia manodidina ny vehivavy tokana. Tsy misy afa-tsy ilay tsara tarehy, Anna Ortiz.
Ny tantaram-pitiavana an'i Andres Iniesta miaraka amin'i Anna Ortiz
Anna Ortiz dia Catalan ary manam-pahaizana manokana momba ny fananganana profesora, sary an-tsaina,
ny fitafy volo, ny hatsaran-tarehy sy ny fahasalamana, miasa amin'izao fotoana izao ho toy ny mpandrafitra ao Coton et Bois.
Nihaona nandritra ny fotoana niaretany i Iniesta tamin'ny lozam-piasany tamin'ny taona 2008. Latsa-pitia taminy izy raha nanolotra soso-kevitra momba ny fahasalamana ara-batana izy.
Tamin'ny volana septambra 2010 Andrés Iniesta nanamafy fa bevohoka tamin'ny zanany i Anna. Izy dia niteraka an'i Valeria Iniesta Ortiz. Ity ambany ity ny sarin'i Valeria miaraka amin'ny ray aman-dreniny.
Andres Iniesta, Anna Ortiz ary Valeria zanany vavy
Andres iniesta sy Anna Ortiz taorian'ny efa-taona izay niara-nipetraka tamim-pifaliana dia nanapa-kevitra ny hanambady any 2012. Ny fanambadiana dia natao tao amin'ny lapan'ny Tamarit akaikin'i Tarragona.
Anisan'ireo anarana malaza manatrika ny fampakaram-bady i Lionel Messi, ary koa i Samuel Eto'o, mpikomy an'i Barcelona.
Fotoana fohy taorian'ny fampakaram-bady dia naneho ny vaovao tamin'ny mpanaraka azy 3.9million tao amin'ny Twitter, namoaka sary ny tenany sy ny vadiny ary nisioka hoe: 'Andro mahagaga! Mpivady vao.'
Sary fampakaram-bady Andres Iniesta
Andres Iniesta sy ny vadiny Anna Ortiz dia nandany ny volombatony teny amoron-dranomasina tany Cancun, Meksika. Tao, ireo vao teraka vao haingana ireo dia nientanentana be sy nahafinaritra rehefa nanao ny ankamaroan'ny toetr'andro.
Andres Iniesta mankafy honey avy amin'ny vady
Tamin'ny 31st of May, 2015, Andres sy Anna dia manana ny zanany faharoa ary ny zanany lahy voalohany. Paolo Andrea Iniesta no anarany.
Andres Iniesta feno family photo
Andres Iniesta dia raim-pianakaviana mahafinaritra izay tia mandany fotoana amin'ny zanany. Miezaka foana izy hampahafantatra an'izao tontolo izao. Izy dia ray aman-dreny tena izy izay mametraka ny zanany mihoatra ny zavatra ilainy sy ilainy.
Andres Iniesta- Ilay Ray be fitiavana
tahaka Radamel Falcao ary Robert Lewandowski, Andres Iniesta dia niaina fiainam-pianakaviana sambatra.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Wine Company
Eny, mpitantana ny Premier League teo aloha Sir Alex Ferguson ary i Harry Redknapp dia fanta-daza noho ny fitiavany ny divay, kanefa tsy nisy na dia iray tamin'izy ireo aza nandeha nankany amin'ny tanimboaloboka na ny trano fivarotana.
Ankoatra izany, ny mpilalao baolina kitra amin'izao fotoana izao dia mety hametraka ny harenany ho fiara ara-panatanjahan-tena na trano fialantsasatra, toy izay hampiasa vola any amin'ny esoteric toy ny fambolena ny voaloboka.
Saingy angamba tsy dia fantatra loatra, noho ny fepetrany mangina, Andres Iniesta izay nametraka ny fotoanany sy ny volany ho famokarana divay.
Andres Iniesta- Mpanamboatra mpamokatra divay
Nandritra ny fampakaram-bady, nataony ny mpitsidika rehetra ny mpisotro azy ny divay Iniesta izay nomena anarana hoe Valeria zanany vavy.
Ny raharaham-pianakaviana ho azy. Raha niaina tany Espaina ianao dia mety mahita koa ny tarehiny mipoitra avy amin'ny dokambarotra manandratra divay avy amin'ny orinasam-pianakaviana, Bodega Iniesta. Asa goavana izany ary tafiditra amin'izany ny fianakaviana rehetra.
Efa nanana ny raharaham-barotra ny fianakaviana talohan'ny nahombiazany ho mpilalao baolina kitra nahomby, ary rehefa nihalehibe dia lasa mpikatroka ihany koa izy.
Raha ny marina, i Iniesta no taranaka fahatelo avy amin'ny fianakaviany handray anjara amin'ny orinasa divay, izay napetraky ny raibeny José Antonio.
Amin'ny ankapobeny, ny fianakaviana dia manana tanimboly 180 hektara, ary ny divay rehetra dia avy amin'ny voankazo manokana.
Ny orinasa dia miorina ao Albacete, fiara roa ora avy any Valencia, ary adiny roa sy sasany avy ao Madrid, tsena lehibe indrindra. Ny orinasa dia mampiasa olona 35, 25 ao amin'ny trano fivarotana, ary ny 10 dia feno ao amin'ny tanimboaloboka izay ahazoana voankazo manokana.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, ny orinasany dia mivarotra divay antsoina hoe Valeria zanany, ary ny iray hafa taorian'ny zanany lahy Andrea Andrea.
Izy koa dia nampiditra divay hafa antsoina hoe "116" izay mahatsiaro ny minitra mandritra ny lalao rehefa nahazo ny tanjany nandritry ny fifanintsanana tamin'ny mondialy 2010 izy.
Amin'ny ankapobeny, 1 ka hatramin'ny 1.2 tapitrisa divay dia entina amin'ny orinasa isan-taona. Ny divay dia hita any amin'ny firenena 33, anisan'izany i Azia atsinanana, atsimo, afovoany sy avaratra Amerika, ary any andrefana sy atsinanan'i Eoropa. Ao amin'ny UK Mividy £ 6.50 amin'ny £ 17 izy ireo.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mpanafika Madrid izy taloha
Toy ny mpankafy baolina tanora hafa, Andres Iniesta nanohana ny kliobany teo an-toerana, Albacete sy Barcelone dia faharoa farafaharatsiny satria nanompo tanteraka an'i Michael Laudrup. Raha vao enin-taona monja dia nandresy ny andriambavilanitra 7-1 ireo mpanjakavavin'i Katalonia ary nahatonga azy ho feno fankahalana ny lafiny izay afa-po amin'ny alàlan'ny fanovana ny fifamatorany amin'ireo mpifaninana mpifankatia Real Madrid.
Niova soa kokoa ny fiovany ny fiovam-pony raha toa ka nifindra tany amin'ny Real Madrid tao 1994 i Laudrup. Araka ny nambara mialoha, dia ny dadany no nahatonga azy hifanerasera tamin'i FC Barcelone.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mankasitraka be voninahitra
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Andres Iniesta dia tsy isalasalàna fa ilay mpilalao baolina kanto indrindra any Espaina. Ny divay dia mivarotra am-pahamendrehana any Madrid, ny tranon'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy.
Any Catalonia izy no hajaina ho kapitenin'i Barcelone, ary any Espaina hafa kosa nohajaina ho ilay lehilahy nahazo ny Mondialy ho an'i Espaina.
Izy koa dia karazam-pianakaviana espaniola iray, izay ankafizin'ny olona. Ary tsy miditra amin'ny adihevitra ara-politika izy, izay indraindray misy mpilalao Barcelona na Real Madrid hafa.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tsy nitady an'i FC Barcelone mihitsy izy
Ny kintan'i Barcelona, ​​Andres Iniesta, dia nanambara tamim-pahatsorana fa tsy te hiditra amin'ny klioba Katalana izy tamin'ny voalohany noho ny fifamatoran'ny fianakaviany tamin'ny klioba. Te hanana fanamby vaovao izy, fikatsahana lavitra ny fonenany.
Ao amin'ny teniny, "Tsy te ho tonga aho satria nieritreritra ny fifandraisan'ny fianakaviako tamin'izy ireo. Nila nandeha tany amin'ny toerana iray lavitra aho, " Niteny i Iniesta BEIN SPORTS.
Ny andalana nandritra ny herinandro sy ny resadresaka tamin'ny raiko dia nahatonga azy hiverina.
Nitohy i Iniesta ..."Manana fahatokian-tena be dia be i Dada, manana fifandraisana be dia be ary fantatro fa mahomby izy rehefa miteny amiko izy. Manaja ny dadako aho ary fantatro fa mila manaisotra ny fiaramanidina aho. Taorian'ny fanapahan-kevitro nilalao tamin'ny FC Barcelone, dia hitako ny volana ratsy indrindra teo amin'ny fiainako tamin'ny maha-olona ahy, saingy ny fanampian'ny tsirairay isan'andro dia tsara kokoa izany. "
Mazava ho azy fa ny fanapahan-kevitr'i Iniesta dia tena nahomby tokoa.
Andres Iniesta Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Ireo Nicknames maro
Iniesta dia manana anaram-bosotra maromaro. Matetika ny Espaniola no manondro azy Don Andres raha ny sasany niantso azy El Ilusionista (The Illusionist) noho ny fahaizany sy ny fahavononana hilalao amin'ny toerana rehetra eny amin'ny lampihazo.
Ny hafa niantso azy hoe El Cerebro (Ny atidoha) noho ny fahalalany ny baolina kitra.
Ao anaty lavaka iray ao Galacticos malaza any Madrid, ny Iniesta manerana ny tany dia nantsoina hoe El Anti-Galactico.
Farany, nahazo ny anaram-bosotra (The Knight Pale) ihany koa ny bibikely Iniesta.
Andres Iniesta Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra-Vonoina indray ny kaonty IG
Andrés Iniesta dia mampiasa Instagram tahaka ny olon-kafa. "Raiko tia ny maka sary ny zanany, sakafo matsiro, ary trano mahaliana," izy dia nanoratra tao amin'ny lahatsoratra Medium iray vao haingana.
Indray andro, nahitana tampoka ny kaontiny tampoka i Iniesta, ary nilaza tamin'ny Instagram fa nanitsakitsaka ny fepetran'ny orinasam-panompoana miaraka amin'ireo fianakaviana, sakafo ary sary momba ny trano fandraisam-bahiny izy.
Nahita i Iniesta fa somary hafahafa, ary ny toe-javatra dia vao mainka mahakasika ny fotoana nanoloana ny Andrés Iniesta, raha tsy teo ny fampitandremana azy.
Iniesta dia nanandrana imbetsaka tamin'ny Instagram imbetsaka tsy misy valinteny avy amin'ny orinasa, na dia efa nanjavona aza ny sariny ary nomena ny olon-kafa ny anarana nomeny.
Saingy tamin'ny farany dia Instagram no nanao ny marina, namerina nametraka indray ny kaonty i Iniesta ary nanery ny kintana baolina ho amin'ny iray hafa, latsaky ny mpampiasa anarana tsy misy dikany.
Ao amin'ny fanambarana nomena ny Gizmodo, Instagram dia tsy hiditra amin'ny antsipirihany momba ny fomba nahatonga izany hitranga haingana be sy tsy misy antony mazava na azo ekena.
"Nanao fahadisoana izahay ary namerina ny tantara raha vantany vao nianatra momba izany izahay," hoy ny orinasa. "Ny fialantsinantsika dia mivoaka mankany Atoy Iniesta noho ny zava-tsarotra nataonay."
Sergio Ramos Childhood Story Plus tsy azo fantarina
Alvaro Morata Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Daty efa namboarina: 24 may 2020